Wasiir Beyle oo sheegay in Bangiga Adduunka iyo Midowga Yurub ay Soomaaliya ugu yabooheen $240M | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Wasiir Beyle oo sheegay in Bangiga Adduunka iyo Midowga Yurub ay Soomaaliya...
Wasiir Beyle oo sheegay in Bangiga Adduunka iyo Midowga Yurub ay Soomaaliya ugu yabooheen $240M
Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya Dr Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo shir jaraa’id ku qabtay Muqdisho waxa uu faahfaahiyay wixii u qabsoomay bishii tagtay wasaaradda Maaliyadda.
Wasiir Beyle waxa uu sheegay Bankiga aduunka iyo hay’adda lacagta aduunka inay ku qanceen hufnaanta nidaamka maaliyadda dalka, ayna ka gudbeen wajiga labaad ee habka deen cafinta Soomaaliya, isagoo sheegay in iminka laguda galay wajigii ugu dambeeyay ee deen cafinta oo ay horyaalaan shuruudo hor leh.
Wasiirka Maaliyadda Maaliyadda Soomaaliya C/raxmaan Ducaale Beyle ayaa tilmaamay in hagaajinta maamulka Maaliyadda Soomaaliya ay sababtay in Bankiga aduunka ay sanadkaan ugu yaboohaan Soomaaliya 140-milyan oo doolar halka midowga yurubna ay ku deeqeen 100M.
C/raxmaan Ducaale Beyle wasiirka Maaliyadda Soomaaliya ayaa sheegay in sidoo kale la ogaan doono safaaradaheena dibadda hadii ay jiraan lacago soo gala iyo halka lagu bixiyo, iyo tirada shaqaalaha ka howlgala safaaradaha Dibadda ee Soomaaliya.
Previous articleWasaaradda Arrimaha Gudaha oo Daah-furtay Barnaamijka wadatashiga wacyigalinta Doorashooyinka (Sawiro)
Next articleShir Doorashooyinka looga hadlayay oo Muqdisho lagu soo gabagabeeyay